Olee otú iji tọghata MXF ka DVD ọsọ ọsọ na mfe
> Resource> DVD> Olee otú iji tọghata MXF ka DVD
Dị ka ọtụtụ ndị, ị nwere ike ọchịchọ ọkụ gị camcorder vidiyo na DVD, otú i nwere ike onwe gị obi ụtọ na nnukwu ihuenyo TV na, na-na-atọ ụtọ na ebe nchekwa ruo mgbe ebighị ebi, ma ọ bụ ịkọrọ ndị ọzọ ihe conveniently wdg Ọ bụrụ na gị camcorder Ome vidiyo na MXF format, dị dị ka Panasonic HVX200 na Canon XF300, ihe ike ịbụ a nta tricky. Nke ahụ bụ n'ihi MXF faịlụ ndị ike iji na kasị ngwa. Ọ bụrụ na ị na-adịghị ama hụrụ dị oké ngwa na-enye gị ohere ọkụ MXF ka DVD, i nwere ike ịgbalị Wondershare DVD Onye Okike.
Ya n'ụzọ zuru ezu na-akwado MXF format, na nwere ikike ka ị ọkụ a ọkachamara-na-achọ DVD diski gị MXF footage videos. Site n'enyemaka nke ya kemfe video nchịkọta akụkọ, ị nwere ike ngwa ngwa na-adị mfe bee niile magburu onwe mkpachị si gị videos n'ime a DVD diski, ọbụna welie videos na-eme ka a persionalized DVD. Ọzọkwa, ọ na-enye gị a otutu jụụ DVD menu ndebiri iji họrọ si. Na otu onye okwu, a usoro na-eme ka ya mfe n'ihi na ị na-esure MXF videos elu-àgwà DVD.
Dum usoro dị mfe dị ka 1-2-3. Dị nnọọ na-eso nduzi n'okpuru na-amalite gị oké oru ngo.
1 mbubata gị MXF videos
Mbụ, jikọọ gị camcorder ka PC, na mgbe ahụ mbupụ MXF faịlụ gị na kọmputa. Ugbu a, na-agba ọsọ a oké MXF ka DVD burner, na-amalite mbubata gị MXF faịlụ ka ngwa a. Iji mee nke a, i nwere atọ apụtakarị ụzọ ịhọrọ site na:
Bugharịa òké na "+ Import" button na a na ngwa ekpe ebi ndụ, wee pịa ya ịgbakwunye gị Obodo MXF faịlụ.
E a-acha anụnụ anụnụ gburugburu bọtịnụ na n'elu-n'akụkụ aka ekpe nke a window. Ị dị nnọọ pịa ya na họrọ "Tinye Files ..." nhọrọ mbubata videos.
Alternatively, chọta na nchekwa na e dere gị MXF faịlụ, na mgbe mbubata faịlụ na ị chọrọ site ikpuru-na-dobe.
1. Ịgbanwe video usoro, otú ahụ kwukwara videos pụrụ ime ndokwa dị ka play iji. Ime ya, ị ma pịa "↑" ma ọ bụ "↓" nhọrọ na ala nke a window ma ọ bụ dọrọ & dobe a faịlụ ka ebe ị chọrọ.
2. Iji jikwaa gị videos mma, ị nwere ike ịhọrọ tinye ihe ọhụrụ utu aha site na ịpị "Tinye aha" button.
3. See Dezie nhọrọ na otu nke video item Ogwe ka ewepụtụ, akuku, bugharia videos, tinye dị iche iche jụụ mmetụta ka videos, ọbụna ịgbanwe video ìhè / iche / saturation / olu wdg
Gaa NchNhr window, Bugharịa ihe mmịfe n'akụkụ aka nri ruo mgbe ị na-ahụ ọkacha mmasị gị DVD menu template. Mgbe ahụ, dị nnọọ pịa ya itinye na oru ngo, wee tinye thumbnails, buttons, ederede, ndabere image, n'okirikiri wdg hazie ihe pụrụ iche DVD menu. (Cheta: Ọ bụrụ na i nwere ike ịhụ a afọ ojuju DVD menu template na nke a ngwa, ị dị nnọọ pịa green ala akụ icon ibudata ọzọ free DVD menu ndebiri online.)
Mgbe ahụ, emeghe "Preview" window site na ịpị "Preview" taabụ. Ebe a, ị nwere ike ịlele finial mmetụta. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgbanwe ihe, dị nnọọ laghachi eme ya ọzọ.
3 tọghata MXF ka DVD
Mgbe ị fanye a ide DVD5 ma ọ bụ DVD9 diski, ị dị nnọọ see "Ọkụ" taabụ na n'elu nke a window nne Mmetụta na "Ọkụ ka diski" nhọrọ na see "Ọkụ" button n'ebe ahụ. Otu mgbe, a na ngwa ga-amalite na-ere ọkụ gị MXF faịlụ ka DVD diski (Cheta: Ọ bụrụ na a na ngwa na-adịghị akwụ ụgwọ, ọ ga-ọkụ DVD na a watermark.) A mgbe e mesịrị, ị ga-enweta a playable DVD diski. Dị nnọọ nwere a fun!
Cheta na: Nke a ngwa ga mpikota onu ya dabara na gị DVD disck ma ọ bụrụ na size nke mmepụta faịlụ bụ nnọọ nnukwu.